Soo-saareyaasha Kaararka RFID - Shirkadaha Kaararka Rfid Shiinaha & Warshadda
13.56Mhz HF kaarka rfid
13.56Mhz HF kaararka rfid waxay raacaan ISO 14443A iyo ISO 15693, maamuuska ISO14443B. Waxay leeyihiin baaxad weyn EEPROM, amni sare iyo macaamiil ayaa ku qori kara taariikhda qayb kasta iyo baloogyada. Codsi badan ayaa la adeegsaday.
125khz LF kaarka rfid
MIND waxay bixisaa EM4305, EM4200, EM4100, TK4100 (oo la jaan qaada EM4100 chip), ATMEL T5577 iyo HID 125KHZ LF Smart RFID Cards, oo u badan LF Smart RFID Cards waxaa loo aqriyaa oo kaliya sida EM4100, TK4100 iwm Laakiin ATMEL T5577 iyo HID 26bits iyo HID 37 xoogaa yar ayaa akhrin kara dibna u qori kara xogta gudaha.
Kaadi laba-geesood ah rfid / kaar Hybrid
Kaadhka laba jeer ee rfid waa nooc ka mid ah kaarka soo-dhexgalka caqliga oo leh tikniyoolajiyad sare iyo shaqooyin dhameystiran. Isku darka kaarka soo noqnoqda ee hooseeya, kaarka soo noqnoqda sare iyo kaarka UHF ayaa sidoo kale loo yaqaanaa kaarka laba-laabashada. Waxaa badanaa laga isticmaalaa bangiyada, iskuulada iyo meelaha kale.
Kaarka Fudan F08
Kaarka Fudan F08 wuxuu ka kooban yahay fm11rf08 chip, anteeno iyo kaarka salka; ma qaado koronto; waxay ka heshaa tamarta akhristaha anteenada inay ku shaqeyso, isgaarsiinta ay la leedahay aqristaha waxaa lagu ogaadaa tiknoolajiyada hirarka raadiyaha
Kaarka Mifare wuxuu adeegsanayaa NXP asalka asalka ah, sida NXP mifare classic 1k s50, NXP mifare classic 4k s70, NXP mifare Ultralight ev1, NXP mifare Ultralight c, NXP mifare Desfire 2k / 4k / 8k ev1, NXP desfire 2k / 4k / 8k ev2 iyo NXP mifare oo lagu daray 2k / 4k iwm.
NFC waa teknoolojiyad isku xirnaanta fiilooyinka oo si fudud u gaarsiisa, isgaarsiin deg deg ah. Marka loo barbardhigo RFID, NFC waxay leedahay astaamaha masaafada u dhow, baaxadda weyn iyo isticmaalka tamarta yar.
Kaarka lugaha ee RFID
Inta badan kaarka 'RFID clawshell' wuxuu kujiraa 125Khz frequency iyo oo leh Atmel chip: T5577 ama E-Marine chip: EM4100, waxaan sidoo kale leenahay xulashooyin jajab ah oo la tartami karo sida kaararka TK4100 clawshell hadii macaamiil loo baahdo.